ट्रम्पलाई कोरोना छैन, बेलायत र आयरल्याण्डको यात्रामा पनि रोक ! – Sagarmatha Online News Portal
ट्रम्पलाई कोरोना छैन, बेलायत र आयरल्याण्डको यात्रामा पनि रोक !
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति ड्रोनाल्ट ट्रमलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोना भाइरसको परीक्षण गरेको तर संक्रमण नरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने प्रयासमा रहेको अमेरिकाले युरोपका विभिन्न देशमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकाको यात्रा प्रतिबन्धको सूचिमा बेलायत र रिपब्लिक अफ आयरल्याण्ड पनि समावेश भएका छन् । बेलायत र रिपब्लिक अफ आयरल्याण्डमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध आउँदो मंगलबारदेखि सुरु हुने अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले घोषणा गरेका हुन् । यसअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको यात्रा प्रतिबन्ध युरोपियन युनियनका २६ देशमा शनिबारदेखि लागु भएको छ ।
उपराष्ट्रपति पेन्सले सो सूचिमा बेलायत र आयरल्याण्ड पनि समावेश भएको बताएका हुन् । उनले कोरोना भाइरसको निशूल्क परीक्षण सबै अमेरिकीलाई उपलब्ध गराइने पनि बताएका छन् । अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ५७ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै २८ सयजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
विश्वका १ सय ४१ देशमा अहिलेसम्म १ लाख ३२ हजार ५ सयजना भन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको डब्लुएचओले जनाएको छ । अहिले भाइरसको इपिसेन्टर युरोप बनेको डब्लुएचओको भनाई छ । गएको डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले चीनमा अति कम भएको छ । अमेरिकाले युरोपका देशमा ३० दिनको यात्रा रोक लगाएको हो । अमेरिकाले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका देशहरुमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आइसल्याण्ड, इटाली, लात्भिया, लिचेस्टाइन, लिथुवानिया, लग्जेम्बर्ग, माल्टा, नेदरल्याण्डस, नर्वे, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन, स्वीडेन र स्वीट्जरल्याण्ड छन् ।
Published On: २ चैत्र २०७६, आईतवार